सातामा २३ प्रतिशत घट्यो कारोबार - Naya Patrika
सातामा २३ प्रतिशत घट्यो कारोबार
गत साता नेप्से ४ दशमल २३ अंक बढेको छ । नेप्से उकालो लागे पनि अघिल्लो साताको तुलनामा गत साता कारोबार रकम भने घटेको छ । आगामी दिनमा बजारले कुन दिशा लिने भन्ने निश्चित नभएका कारण लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । फलस्वरूप कारोबार रकममा कमी आएको छ । गत साता पाँच कारोबार दिनका लागि खुलेको बजार पहिलो दुई कारोबार दिनमा ओरालो लागेको थियो भने पछिल्लो तीन कारोबार दिनमा उकालो लागेको थियो । अघिल्लो साताको बुधबारदेखि ओरालो लागेको बजारमा कम्पनीका सेयरमूल्य सस्तिएपछि खरिदकर्ताहरू सक्रिय भएका थिए । यसले गत साताको पछिल्ला तीन दिन बजार उकालो लाग्न टेवा पुगेको थियो । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई गत साताको अन्तिम कारोबार दिन ४६ दशमलव शून्य ४ स्केलमा रहेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिद–बिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
गत साता १ सय ८५ कम्पनीको २३ हजार ४ सय ९९ पटकको कारोबारमा रू. २ अर्ब २३ करोड ७७ लाख ५३ हजारबराबरको ५४ लाख ७४ हजार ३ सय कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । अघिल्लो साताको तुलनामा गत साताको कारोबार रकम २३ दशमलव ३८ प्रतिशत घटेको छ । अघिल्लो साता १ सय ८० कम्पनीका २९ हजार ३ सय ३० पटकको कारोबारबाट २ अर्ब ९२ करोड ५ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको ६८ लाख २७ हजार ६ सय ८० कित्ता सेयर खरिद–बिक्री भएको थियो । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार ४ सय ८९ दशमलव शून्य ६ बिन्दुमा बन्द भएको बजार गत साताको बिहीबार १ हजार ४ सय ९३ दशमलव २९ बिन्दुमा बन्द भएको छ । परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १७ दशमलव ५७ अंक बढेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पहिलो दिनको तुलनामा ३ दशमलव ८३ अंक बढेर ३ सय १४ दशमलव ४३ बिन्दुमा पुगेको छ ।
गत साता कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसूचक बढेको छ । बिमा समूहको परिसूचक गत साता सर्वाधिक ६७ दशमलव ७३ अंक बढेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत् समूहको परिसूचक ५९ दशमलव ४२ अंक, होटेल समूहको ४६ दशमलव ३९ अंक, लघुवित्त समूहको २३ दशमलव ५२ अंक, विकास बैंक समूहको २० दशमलव ४८ अंक र वाणिज्य बैंकको १६ दशमलव ८२ अंक बढेको छ । कारोबारमा आएको वित्त समूहको परिसूचक २ दशमलव ८७ अंक, ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव ४४ अंक, व्यापार समूहको शून्य दशमलव ६८ र उत्पादनमूलक समूहको शून्य दशमलव ६३ अंक बढेको छ ।
गत साता नेप्सेमा ६ कम्पनीका कुल १ करोड ४५ लाख ९० हजार १ सय २७ दशमलव ७४ कित्ता सेयर सूचीकृत भएका छन् । सो साता लक्ष्मी बैंकले १ करोड १५ लाख ६३ हजार ६ सय ५२ कित्ता, वेस्र्टन डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख १३ हजार ९ सय २० कित्ता, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ८ लाख ४८ हजार १ सय ९३ कित्ता र राप्तीभेरी विकास बैंकले १ लाख ३२ हजार ९ सय ८३ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेका छन् । त्यसैगरी, माछापुच्छ«े बैंकले १ लाख ६० हजार ७ सय ४२ दशमलव ६४ कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत गरेको छ भने ज्योति विकास बैंकले १५ लाख ७० हजार ६ सय ३७ दशमलव १० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेको छ ।
गत साता कारोबार रकमका आधारमा साना किसान विकास बैंक लिमिटेडको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ भने सेयर संख्याका आधारमा सिभिल बैंक अगाडि रहेको छ । कारोबार संख्याका आधारमा भने एभरेष्ट बैंक अगाडि रहेको छ । सो साता साना किसानको २१ करोड ९९ लाख २० हजारबराबरको संस्थापक सेयर खरिद–बिक्री भएको छ । सिभिल बैंकको २ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ भने एभरेष्ट बैंकको १ हजार ४ सय ५० पटक कारोबार भएको छ ।
शुक्रबार नेप्सेमा १ करोड ४२ लाख ९६ हजार ४ सय २ दशमलव १ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । यस दिन चार कम्पनीले सो सेयर सूचीकृत गरेका हुन् । ज्योति विकास विकास बैंकले यस दिन १५ लाख ७० हजार ६ सय ३७ दशमलव १ कित्ता साधारण सेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हो ।
राप्तीभेरी विकास बैंकलाई प्राप्त गरेपश्चात् बैंकले सो सेयर सूचीकृत गरेको हो । लक्ष्मी बैंकले यस दिन १ करोड १५ लाख ६३ हजार ६ सय ५२ कित्ता, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले ८ लाख ४८ हजार १ सय ९३ कित्ता र वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकले ३ लाख १३ हजार ९ सय २० कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेका छन् ।
नयाँ नेपालको बोनस
नयाँ नेपाल लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले २० प्रतिशत बोनस र १ दशमलव शून्य ५२६ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने भएको छ । मंसिर ८ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आवको नाफाबाट सो बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपश्चात् सो लाभांश वितरण गरिनेछ । साथै सोही बैठकले बोनस सेयर वितरण पश्चात् कायम चुक्ता पुँजीमा १ बराबर २ दशमलव ५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार नेप्सेले रिलायन्स फाइनान्सको मूल्य समायोजन गरेको छ । नेप्सेले कम्पनीको २० प्रतिशत बोनस सेयरपछिको समायोजन मूल्य रू. १ सय ५७ तोकेको छ । समायोजनका लागि कम्पनीको औसत आधार मूल्य रू. १ सय ७६ तोकिएको थियो ।
गण्डकी विकासको बुक क्लोज
गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले मंसिर १५ गते सेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्ने भएको छ । बैंकले ४ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि सो दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । बैंकले प्रतिकित्ता रू. एक सय अंकित मूल्यका ४६ लाख ९ हजार ८ सय १४ दशमलव ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकको सेयर रजिस्ट्रार प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।